Five Astro-Hevi-diso momba ny Space sy Astronomia
Manana hevitra hafahafa momba ny astronomia sy ny fitrandrahana habaka ny olona. Izy ireo dia miompana amin'ny lava-piainana lava amin'ny tantara izay saika toa teorika toy ny teorika. Andeha hojerentsika "astro-nots" mahaliana sy mampientanentana.
Tsy nipetra-potsiny ny volana
Ny olona sasany dia mbola mitazona fanambarana tranainy sy lava tsy voavaky fa ny olombelona dia tsy tonga amin'ny Moon . Mbola miverina ihany anefa izy io. Raha ny tena izy, misy porofo feno ary an-tsipirihany manaporofo fa lehilahy 12 no nandeha tamin'ny Moon ary namerina ireo karazan-tsakafo samihafa ho an'ny fanandramana eto an-tany.
Ny voalohany dia ny Apollo 11, izay nitranga tamin'ny 20 Jolay 1969. Anankiray, olona an-tapitrisany manerana an'izao tontolo izao no nijery ny tany amin'ny taona nanaovana ny asa fitoriana Apollo , nahita ireo iraka tao anatin'ny fotoana tena izy. Tsy nisy na iza na iza tao amin'ny NASA namaky ireo tany. Ny porofo lehibe indrindra dia ny vato izay naverin'ny mpandositra nateraka avy any an-danitra. Hita tamin'ny fandinihana nataon'ny manam-pahaizana momba ny jeolojia sy ny mpahay siansa momba ny planeta fa avy tamin'ny volana izy ireo. Tsy afaka ny ho voa ny geology, na ny siansa.
Ny fiheverana fa ny NASA dia mety "hosoka" andian-dalavan'i Moon sy hitazonana azy miafina amin'ireo olona an-jatony an'arivony manerana an'izao tontolo izao izay niasa tamin'ny asa fitoriana dia tena mahatsikaiky rehefa mitsahatra ny mieritreritra an'izany. Na dia izany aza dia tsy nitazona charlatany vitsivitsy tamin'ny fanoratana boky sy ny famoahana vola avy amin'ny olona marefo. Aza mety ho anisan'ireny olona ireny.
Ny kintana sy ny planeta dia milaza ny hoavinao
Nandritra ny fotoana dia nisy ireo olona izay mihevitra fa ny mijery ny kintana sy ny toerana misy ny planeta dia hanambara ny hoaviny.
Izany no nolazain'ny fanandroana astrolojika ary mety tsy dia misy ifandraisany amin'ny astronomia izany . Astrôkôla dia lalao an-dakozia izay efa nandritra ny taonjato maro, ary ny filazany voalohany amin'ny laza dia ny fanombantombanana ny fiainan'ny olona mifototra amin'ny toerana misy ny planeta ao anatin'ny kodiariny, ary ny antsoina hoe fitaratry ny planeta iray amin'ny olona iray fotoana nahaterahany.
Na izany aza, dia hita fa tsy misy hery na fihenan'ny planeta iray amin'ny olona iray, ankoatra ny herin'ny fahantrana eto an-tany (izay misy ny olona rehetra (hatramin'izao) no teraka)). Raha ny marina, rehefa mieritreritra an'izany ianao, ireo hery izay matanjaka indrindra amin'ny zazakely amin'ny fotoana fiterahana dia ireo ampiharin'ny renim-pianakaviana sy ny dokotera ary / na ny mpampivelona rehefa miasa izy ireo mba hitondra ilay zaza. Ny herin'ny tany dia mihetsika amin'ny zaza. Saingy, ny herisetra na hery hafa mistery avy amin'ny planeta izay mandry an-tapitrisany (na an'arivony tapitrisa kilaometatra lavitra) dia tsy mihatra. Tsy afaka manao izany izy ireo. Tsy ampy hery izy ireo.
Astronomia dia ny fandinihana ny toetra, ny fihetsehana, ny fiandohana, ary ny fivoaran'ny kintana, planeta, ary ny vahindanitra. Marina fa astronomer aloha ireo astronoma voalohany (ary tokony ho izy ireo raha tian-dry zareo ny mpanjakany sy ireo mpikatroka mendri-kaja handoavana azy ireo!), Saingy tsy misy amin'izao fotoana izao. Izy ireo dia mpahay siansa mampiasa fampiharana malaza momba ny lalàn'ny fizik mba hitarika ny fikarohana siantifika.
Ny Planeta X dia eo an-dàlambe hanodinkodina / handripaka eto an-tany / hizara vahiny na inona na inona ...
Misy ny fiovaovan'ny tantaran'ity rakitra tranainy ity, matetika, amin'ny fampahalalam-baovao. Raha ny momba ny astronoma dia miresaka momba izay misy ao amin'ny rafi-masoandro ety ivelany na eny amin'ny kintana hafa, dia misy olona manoratra tantara momba ny planeta goavambe iray mitondra antsika.
Matetika dia misy fitarainana tsy marim-pototra matetika momba ny fomba hanafenan'ny ISA / ny governemanta amerikana / ny kaomisiona TriPartite / vondrona mpioko hafa manafina izany vaovao izany amin'ny olona. Mba hamaranana mazava tsara: TSY misy planeta mankany an-tany. Raha nisy, maro tamin'ireo astronoma (na matihanina sy mpankafy) dia nahita izany ary naneho hevitra izany hatramin'izao.
Ny astronoma dia nampiasa teleskaopy mahaleotena antsoina hoe WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer) sy ireo masoivoho mifototra amin'ny tany toy ny Gemini, Keck, ary Subaru mba hikaroka ireo zavatra lavitra ao amin'ny rafi-masoandro, ary koa ireo asterôida izay mety hihataka loatra amin'ny tany . Nahita porofo mampihetsi-po izy ireo fa misy ny vatana lehibe kokoa izay mihodina "any". Hatramin'izao anefa, TSY misy zavatra lehibe mifanaraka amin'ny filazalazana momba ny Planet X na Nemesis na Nibiru na izay tiany hiantsoana izany.
Na inona na inona ireo zavatra ireo dia "eo", toa miseho manaraka ny arabe mahazatra manodidina ny Masoandro izy ireo. Tsy misy manao teboka ho antsika. Noho izany, rehefa mamaky momba ny planeta X ianao amin'ny manaraka, dia vakio miaraka amin'ny sira. Tsia, sakana iray.
Ny Astronomia dia nahita fiainana tany an-toeran-kafa ary miafina izany
Indray mandeha monja, ny milina dia mipoitra ihany amin'ny filazana fa nahita astronoma iray hafa tahaka izao tontolo izao ny astronoma ary ny "FIAINANA NANAFY !!!" lohateny lehibe. Raha manandrana manazava ilay tantara ny astronoma ary manazava fa tsy mitovy ny hoe "manana fiainana" ny hoe "tahaka ny tany", dia miahiahy daholo ny mpandinika ny tontolon'ny fikomiana ary mitaraina hoe "Coverup!"
Ahoana no hitrangan'izany? Maro ireo zavatra afaka manazava ireo tantara ireo. Indraindray misy mpanao gazety tsy mahay mitia amin'ny siansa dia manao tantara tsy mety. Na koa, ny mpahay siansa dia tsy manazava tanteraka ny dikan'ny hoe "toy ny tany" na "mitovy amin'ny tany". Na, amin'ny firotsahana an-tsehatra ho an'ny tantara na famoahana voalohany, ny mpanao gazety dia hanapaka zoro vitsivitsy ao amin'ny tantarany.
Raha miresaka momba ny planeta eto an-tany ireo astronoma, dia miresaka momba ireo mitovy amin'ny Tany amin'ny fomba sasany izy ireo: angamba ny tontolo vao hita dia mitovy ny habeny na ny volany toy ny Tany. Mety ho eo amin'ny toerana iray ihany ao anatin'ny rafitra misy azy ny tany. Mety hisy rano. Saingy, ary zava-dehibe izany, TSY midika fa manohana ny fiainana izany. Eritrereto toy izao: misy oram-batravatra ao amin'ny rafitry ny masoandro izay manana ranomasimbe rano. Manohana ny fiainana ve izy ireo? Tsy misy hevitra. Tsy ho fantatsika raha manao izany izy ireo mandra-pahalalantsika ny karazam-pahefana izay manaporofo fa misy ny fiainana any amin'ireny toerana ireny.
Ny fiainana sy ny fisiany eo amin'ny tontolo hafa dia olana sarotra. Noho izany, rehefa mamaky ianao momba ny fomba nahitan'ny astronoma LIFE ON WOR WORLD !!!!! Manana mpihomehy sira tsara feno rano ianao rehefa mamaky amim-pitandremana.
Hanafika ny Masoandro ho Supernova !!!!!
Karazana karazana kintana toy ny supernova? Tsy ny Masoandro.
Mba hahatakarana izany, dia mila mahafantatra kely ny habetsaky ny kintana. Ny kintana lehibe kokoa, ny mety ho faty dia ny hoe inona no antsoina hoe fipoahana supernova II. Ny kintana izay mihoatra ny 7 na 8 isaky ny masin'ny Masoandro dia afaka manao izany. Na izany aza, ny Masoandro dia tsy afaka. Izany dia satria tsy ampy ny habeny. Ny kintana tahaka ny Betelgeuse na ny hipopotama ao Eta Carinae dia supernovae miandry ny hitranga. Ahoana no anaovany an'izany? Amin'ny fiparitahan'ny olona eo amin'ny tenany, ary avy eo dia mihamitombo haingana amin'ny firosoana goavana.
Ny masoandro kely dia maty amin'ny fomba hafa. Amin'ny farany dia hanomboka hanitatra ny sarony ivelany izy (sembana, tsy arifomba). Ny sisa tavela amin'ny Masoandro dia mihena ka lasa kintana fotsy fotsy. Amin'ny farany dia hihena ny fotsy fotsy (milanja an'arivony taona an'arivony tapitrisa izany).
Mifanohitra amin'izany, ny "zavatra" ateraky ny fipoahan'ny supernova dia tafiditra ao amin'ny antsoina hoe kintana tsy neutron , na ny lavaka mainty. Noho izany, ny masoandro dia ho faty, fa tsy amin'ny fomba mahavariana mampientanentana. Ny fiafaràny dia hitranga amin'ny fomba miadana sy mampihomehy. Izany dia tsy hanomboka an-jatony tapitrisa taona akory, noho izany dia manana fotoana kely hikatsahana planeta hafa hiaina.
Noho izany, raha mamaky zavatra iray ianao milaza fa ny fipoahan'ny masoandro dia mipoaka na manao zavatra hafahafa hafa, ento miaraka amin'ny sira lehibe.
Tahaka ny nanaporofoan'ireo tantara hafa ireo, dia misy hevitra mahatsikaiky momba ny astronomia. Ny fahatakaran'ny siansa no fanalahidy hamantarana ny zavatra mety sy tsy hitranga eto amin'izao tontolo izao.
Famaritana amin'ny endrika môlekular
Famaritana ny fanombohan'ny biôlôjia 'Eu-'
Olars 'Paradox - Nahoana no maizina ny lanitra?
Tetikasan'ny Lab: Ahoana no fomba fanehoana an'izany?
English to Metric Conversions - Method of Canceling
Firy ny karazana fanehoan-kevitra momba ny simika?
Ahoana ny fomba fandefasana rakitra iray avy amin'ny Directory iray ao Perl
Art Glossary: ​​Rindrina mafy sy ravina malefaka
Momba ny fianianana filoham-pirenena Amerikana
Squat ny orana
University of Millersville ao Pennsylvanie
Inona no atao hoe Adidy milefitra?
Jeografia ao Paragoay
Inona no atao hoe siramamy sira?
Adihevitra momba ny fianarana ambony amin'ny fianarana ambony: Dos and Don'ts
Ny vavaky ny Tompo
Architecture any Minnesota ho an'ny mpitsabo mpanampy
English for Medicine - Prescription
Fandevenana an'i Pericles - Famoahana Thucydides
Inona no Alahelona Any Ala?
Mivadika ny Yards ho an'ny Mpitsidika
ABA - Fampiofanana amin'ny ankizy amin'ny Autism
Tatitra momba ny Sulphur
Karatra famakiana asturia